Koety: Tsy Tonga Soa ny Vahiny Haingan-Doatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2018 14:42 GMT
Vakio amin'ny teny Português, македонски, عربي, Español, Shqip, English
Forzaq8 milaza amin'ireo mitaraina amin'ny lalàna vaovao fa nahazo izay notadiaviny ry zareo – rehefa nangataka nandritra ny taona maro hoe fa maninona i Koety no tsy mety mitovy amin'i Emirà Arabo Mitambatra (UAE).
Manazava i Forzaq8:
Iza no tsy efa nandre izany na ny mitovitovy taminy?
“Te-hitovy amin'i UAE izahay”
Nahakrizy ahy mihitsy izany, imbetsaka no nahenoako izany, maninona raha i Etazonia? na i Japan?
Ankehitriny isika manao mitovy amin'ny any UAE dia mitaraina ny olona
Fonzy mieritreritra fa tsy rariny ilay lalàna – fa henjana loatra ny lalàna fandroahana ho fanasaziana. Nanamarika izy:
Feno fanajana sy manohana tanteraka ny fiezahan'ny Minisitera amin'ny fametrahana lalàm-pifamoivoizana eto Koety aho. Saingy indraindray aho mieritreritra fa be loatra ny ataon-dry zareo amin'ny fanasaziana. Vakio fotsiny anie ny lahatsoratra ao amin'ny Arab Times amin'ireo mpivahiny tsy manaja ny lalàm-pifamoivoizana. Tarataratra fa mety ho azy ampodiana ry zareo raha nitsambikina jiro mena ka efa nanao fahadisoana tany aloha… amin'ny teny hafa, fahadisoana roa dia voaroaka ianao!(…)
Mieritreritra izaho manokana fa tafahoatra ilay fampodiana. Efa betsaka na ny fampandoavana onitra na ny fanagadrana. Maninona raha esorina aminy ny fahazoan-dalana aloha ho fanombohana?
Mbola eo amin'ity resaka fifamoivoizana ity ihany, Buzberry namoaka andiam-pandikan-dalàm-pifamoivoizana sy ny onitra mifanaraka amin'izany, raha tezitra amin'ireo manampahefana manakatona lalambe maromaro hanomezan-dalana vahiny manampahefana manatrika fivoriana ao amin'ny firenena i Marzouq avy ao amin'ny Z District.
Manazava ilay Marzouq sempotra dia sempotra:
tsy misy ny fampilazana raha hanakaton-dalana ny polisy na hikatona ny fifamoivoizana. Mamaky gazety aho ary tsy misy ny fanamarihana momba izany, misy fivoriana ao amin'ny Lapa Bayan ary misy olona avy any ivelany hoavy. Niteraka fikorontanan-dalan'i Koety nandritra ny ora maromaro izany, halako ny tavela any ivelany noho io fitohanana mandreraka be io. Lasa natao adiny iray sy folo minitra ny lalana fanaoko ao anatin'ny roapolo minitra, ary lasa adiny iray ny atao 15 minitra mahazatra. Nandeha tao anaty fiara mandeha 10 km isan'ora aho, ary mieritreritra fa nisy izaho fitohanana izao satria nisy adala maromaro tsy nametraka planina hamahana mialoha ny olana. Tokony hanana angidimby maromaro ry zareo itondrana ireo manampahefana ireo fa tsy hampiteraka fitohanana mihoatra ny adiny fito tsy misy fampilazana mialoha.